Home Wararka Guddigii Doorashada Somaliland ayaa Talaxumada iyo Degdegga RW Rooble u kala...
Guddigii Doorashada Somaliland ayaa Talaxumada iyo Degdegga RW Rooble u kala Jebisey Laba Guddi.
Garabkii kale ee maanta laga tashaday ee Gud. Cabdi Xaashi ayaa iyagana tashaday, waana nasiib xumo iyo talaxumada RW Rooble oo u degdegay fashilka isagoo og inay sidaan ku dhammaan karto, dhegahana ka fureystay talooyin dhowr ah oo la sheegay inay meelo kala duwan oo ay Beesha caalamka ku jirta uga yimideen.
Afartii hartay oo ka mid ah guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa iyagan doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen ka dib markii maanta guddiga doorashooyinka garabka Ra’iisul wasaare ku xigeenka ay doorteen guddoon cusub.
Talaabadan waxay u muuqataa mid ay uga jawaabayaan coddeynta Sabtida maanta ah ka dhacdey Teendhada Afasiyooni ee xukuumada xil-gaarsiinta, gaar ahaan RW Rooble iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ay garwadeenka ka wada ahaayeen.
Qodobka ugu culus ee dhinacyada isku hayaan ayaa kala ah: Cabdi Xaashi oo doonaya in doorashada guddoonka lagu galo heshiis, iyo dhinaca kale oo ka faa’iideysanaya tirada badan ee xubnaha guddiga ka haysto, waayo kuwii Rooble uu ku daray ayaa ah kuwa laga soo amray dhinaca Mahdi Guuleed.
Dhinaca Cabdi Xaashi ayaa kaliya guddiga ka ah afar xubnood. Wallow Guuleed qudhiisa uu haysto afar xubnood, haddana waxaa u wehliya saddex kale oo Rooble soo magacaabay kuwaasoo ah xubno dhinaca Farmajo laga keenay.
(Daawo) Warbaahinta Ingiriiska oo sheegtay magaca ninkii dilay Xildhibaanka